Semalt: Indlela Eyona Ngcono Yokukhangela Iwebhusayithi
I-Website Scraping ayinzima umsebenzi. Kukho ezininzi iingcali namhlanje ezikwazi kakuhle ukunceda abasebenzisi ukuqokelela yonke idatha abayidingayo ngokuklibanisa iqhosha. Inkqubo entsha kunye neyobuchule, kwaye abaninzi abaphandi beewebhu bayisebenzisela ukuqokelela yonke inkcazelo enxulumene nayo ukuze banqobe abakhuphiswano babo kunye nokunyusa ukusebenza kwenkampani yabo.Enyanisweni, banokufumana iinkcukacha ezininzi, njengoluhlu lwezonxibelelwano, amaxabiso, iimveliso kunye nokunye okuninzi.
Injongo ye-Web Scraping
Ngaphambi kokuba uphawule amaphepha ewebhu ahlukeneyo, abasebenzisi kufuneka babe nengcamango ecacileyo malunga nento eyiyo yokukhwa kwewebhu isetyenziselwa. Oko kuthetha ukuba ukucoca ngewebhu yindlela ekhoyo yangoku yanceda abaphathi ukuba bafumane yonke inkcazelo abayidingayo ngokusebenzisa iinkqubo ezahlukeneyo zekhompyutha. Ngale ndlela banokukhipha idatha ngendlela elula kwaye ngaphandle kokuchitha ixesha.
Kwiminyaka emininzi edlulileyo, abantu bekufuneka bakhuphe yonke idatha kwiwebhusayithi ngesandla. Kwakungeyona ndlela elula ukususela kwi i-web scrapers kwakufuneka ichithe iiyure ezininzi okanye iintsuku, ukuze zifumane umxholo ababezifuna. Kodwa kwakungekho umsebenzi ongenakwenzeka kubaphandi abaninzi bewebhu kunye nabaprogram kuba kwakungekho ngempumelelo.
I-Tech entsha kunye ne-Automated
I-Web scraping isixhobo esikhulu esinokunika iziphumo ezintle kubasebenzisi bayo ngexesha. Enyanisweni, abaphandi bewebhu banokufumana yonke idatha abayifunayo ngokuchofoza nje kuphela. Bangakwazi ukugcina ixesha kunye namandla, kunye nokuqiniseka ukuba baya kukhangela amanani abo afunayo ngaphandle kweephosiso. Ngemizuzu embalwa nje, banokucwangcisa amaphepha amanqaku emveliso kwaye bafumane iziphumo eziyimfuneko.
Iziphumo eziphumelelayo kunye neKhowudi yeBhotho
Ngenkqakraza yeqhosha, abasebenzisi bangenza bahlule iwebhusayithi kwaye banakho konke iziphumo abazifunayo. Akudingeki ukuba baphume kwaye benze nayiphi na uphando lweemarike. Kunoko, banokufumana yonke inkcazelo abayifunayo kwiikhompyutheni zabo.
njani i-Web Scraping Benefits Market Today
Inkqubo yokuqoqa i-web ibaluleke kakhulu kubantu abaqhuba amashishini. Bangakwazi ukukhupha kwaye basindise inani elikhulu lokuqukethwe ngaphandle kwexesha kwaye bagcine kwiifayile. Yimpazamo enkulu yempazamo yeempazamo ezinika imimangaliso ebasebenzisi bayo.
Ukukhutshwa kwewebhu kuye kwaba yindlela eyaziwayo kakhulu kubaphathi be-e-venkile kunye namaqabane abo. Inokwenziwa lula lula kwaye inika ithuba kubaphathi kunye nabahlobo ukuba bahlalutye amaxabiso kunye nemveliso engcono. I-Web scraping yenziwa yinkqubo yekhompyutheni, esebenzisa iinkqubo ze-scraper ukukhupha umxholo kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo Source .